Natsangan’i Japana ho velona indray i ‘Amabie’, zava-boary fahiny, hiady amin’ny COVID-19 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Marsa 2020 3:37 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Español, Ελληνικά, Română , bahasa Indonesia, Português, 日本語, English
“Zava-baovao miroborobo fatratra ao Japana ny ‘amabie’. Fa inona marina moa izy io? Pikantsary avy amin'ny lahatsary fanazavana ao amin'ny fantsona YouTube ‘Omega Sisters’ .
Jereo ny pejy manokana Global Voices miresaka fiantraika manerantany ny COVID-19
Raha mbola mitaintaina fatratra amin'ny COVID-19 i Japana, dia nitampody avy any amin'ny fotoam-panompoana fahiny tao Japana indray ny zava-boary miavaka hiady amin'ny viriosy, fa tao amin'ny media sosialy kosa no nivoahany tamin'ity indray mitoraka ity.
Talohan'ny tapaky ny volana marsa 2020, nalaza tao amin'ny Twitter ny farangonteny #Amabie (＃アマビエ) raha nifampizara soritsoritra sary sy karazan-javaboary avy amin'ny tontolo hafa nantsoina hoe ‘yokai‘ (妖怪) nivoaka nandritra ny vanim-potoana Edo tao Japana, roanjato taona lasa izay, ny olona ao avy amin'ny vazantany efatra tao Japana.
Fanoritsoritana ny ‘amabie’ iray tamin'ny vanim-potoana Edo. Sary azon'ny rehetra ampiasaina, tao amin'ny Wikipedia.
Mitovitovy amin'ny zazavavindrano lava volo tsy manintona, tamin'ny vanim-potoana Edo, ny ‘yokai’, nantsoina hoe ‘amabie’ (tonòny teny gasy), no voalaza fa niaro tamin'ny valan'aretina mitovitovy amin'ny COVID-19 amin'izao fotoana. Araka ny nolazain'ny anganongano, dia tamin'ny alalan'ny fanoritana sarina ‘amabie’, no nahafahana nanosika ny aretina.
Ao amin'ny Twitter ny olona nanangan-ko velona indray ny ‘yokai’ tamin'ny fizaràna ny sarin'ireny zava-boary ireny tamin'ny alalan'ny fampiasana hashtag (farangon-teny) #Amabie (＃アマビエ).
Fongory ny valan'aretina! #amabie
Miantso ihany koa aho ny fiarovan'ny ‘kami’ (NAOTY: Ny ‘yokai’ dia mety ho karazana ‘kami’ na andriamanitra ao amin'ny kolontsaim-bahoaka japoney).
Tsy ny rehetra no manoritsoritra sary ‘amabie’. Misy olona sasany namorona ny odiny amin'ny bika ‘amabie’. Ity randram-baovao Twitter avy amin'ny mpiara-miasa iray ao amin'ny famoahana manoka-tena amin'ny zavakanto sy ny karazan-tsokitra antsoina hoe ‘Tezukuri Town’ (Tanàna Vita Tanana) ity no maneho izany:
Ao anatin'ny fanantenana hiverenana haingana any amin'ny laoniny sy ny fandriampahalemana, nanangana sarim-biby famantarana ‘amabie’ ny efi-panoratana (ato amin'ny gazetibokinay).
Hita amin'ny sioka manaraka ny maodely sy ny torolalana, ka manandrama manangana ny anareo tsirairay avy.
Malaza ihany koa ny ‘amabie’ natao tamin'ny (akanjo) bà:
Nanao ‘amabie’ tamin'ny bà aho. Efa nisy biby mampatahotra notiavina haingana tao anatin'izay fotoana fohy dia fohy izay ve?
Tamin'ny fanoratana tao amin'ny FU, gazetiboky iray mivoaka isam-bolana ao amin'ny prefektioran'i Fukui, i Nagano Eishu, mpanao fikarohana sady folklorista, manazava ny fanintonana ara-tarazo ny ‘amabie':
Antony iray ny hevitra (ao amin'ny fomba nentin-drazana Japoney) fa amin'ny “fahitana” ny fivoahan'ireny zavaboary vitsy dia vitsy na mahavalalanina ireny isika afa-misitraka ny tombony ara-zava-dalina sasany sy manongotra ny vintan-dratsy. Taloha, (ankilan'ny ‘amabie’), nosoritsoritan'ny olona ihany koa ny sary maneho elefanta, rameva ary eny fa na hatramin'ny zazavavindrano aza, izay miasa tahaka ny ody. Nihevitra ny olona fa amin'ny fahitana fotsiny na amin'ny fametahana ny sary ry zareo no afa-manalava ny andro iainany sy mandositra amin'ny ratsy.
Ary notohizan'i Nagano ny fanazavana fa nandritra ny fisian'ny valan'aretina tany Japana tamin'ny taona 1858, no nahitana sary “biby mampatahotra manan-tongotra telo mitovitovy amin'ny gidro” namidy nanerana an'i Edo (Tokyo amin'izao fotoana izany) ho ody fampandosirana ny kôlerà.
Mbola manohy amin'ny famoahana sary ‘amabie’ ny olona ao amin'ny Twitter. Azonao jerena ireo famoronana hafa amin'ny alalan'ny fanarahana ny farangon-teny #アマビエ (‘amabie).
Mivoaka amin'ireo karazana fampitàna ny ‘Amabie’. Ny lahatsary manaraka no maneho artista iray misokitra tombokase nentim-paharazana japoney amin'ny endrika ‘yokai':